Xildhibaanada Somaliland oo guddoon cusub doortay – Yaa guuleystay mucaaradka iyo muxaafadka? | BANAADIRSOM
Home Wararka Maanta Xildhibaanada Somaliland oo guddoon cusub doortay – Yaa guuleystay mucaaradka iyo muxaafadka?
Xildhibaanada Somaliland oo guddoon cusub doortay – Yaa guuleystay mucaaradka iyo muxaafadka?
Xildhibaanada cusub ee baarlamaanka ee Somaliland ayaa maanta doortay guddoomiye cusub, kadib doorasho ka dhacday magaalada Hargeysa.
Doorashadan oo aheyd mid xiiso leh ayaa waxaa ku tartamay labo musharrax oo kala ahaa Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir (Faratoon) iyo Cabdirisaaq Khaliif Axmed.
Faratoon ayaa metalayey xisbiga muxaafadka ah ee Kulmiye, halka Cabdirisaaq uu ka socday xisbiga mucaaradka ee Wadani, kaas oo ay guushu raacday.
Guddoomiyaha maxkamadda sare ee Somaliland oo shaaciyey natiijada ayaa sheegay in Cabdirisaaq Khaliif uu helay 42 cod, halka Yaasiin Maxamuud Faratoon oo laga guuleystay uu helay 39 cod, waxaana sidaas guddoonka golaha wakiilada ugu guuleystay Wadani.
Cabdirisaaq Khaliif ayaa xilal kala duwan kasoo qabtay Somaliland, wuxuuna laba jeer soo noqday wasiir xilligii Siilaanyo, isaga oo sidoo kale xisbiga Wadani ku biiray 2015-kii.
Sidoo kale guddoomiye ku xigeenka koowaad waxaa ku guuleystay Saciid Mire Faarax oo metalaya xisbiga mucaaradka ah ee Ucid , wuxuuna helay 41 cod, halka musharraxii la tartamayey ee Cumar Jaamac uu helay 40 cod.
Doorashadan ayaa aheyd mid la wada sugayey, waxaana guushan ay xisbiyada mucaaradka u horseedeydaa inay lalan adag la galaan xisbiga talada haya ee Kulimye
Previous articleReal Madrid Oo Arsenal Hor Dhigtay Laba Shardi Si Ay U Hesho Saxiixa Martin Odegaard. – Banaadirsom
Next articleLiverpool Oo Ugu Dambayn Go’aansatay Xiddiga Ay U Dhaqaaqayso Badalka Georginio Wijnaldum – Banaadirsom